ဟီးရိုးနဲ့ Item အနည်းငယ်ကိုသာ ပြောင်းလဲထားတဲ့ Dota2Patch 7.27d ထွက်လာပြီ – MyTech Myanmar
ဟီးရိုးနဲ့ Item အနည်းငယ်ကိုသာ ပြောင်းလဲထားတဲ့ Dota2Patch 7.27d ထွက်လာပြီ
Valve ဟာ Dota2ဂိမ်းအတွက် Update အသစ် 7.27d ကို မျှော်လင့်မထားဘဲ ထုတ်ပေးလာခဲ့ပြီး Pro ပြိုင်ပွဲတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ကာ Item နဲ့ ဟီးရိုး တစ်ချို့ကို Balance ပြန်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ Doom, Dark Seer, Magnus, Spectre တို့ကို Nerf (လျှော့ချ) ခဲ့ပြီး လူကြိုက်နည်းသွားတဲ့ Luna, Medusa, Bloodseeker တို့လို ဟီးရိုးတွေကို သိသာစွာ Buff ပေးထားတာ တွေ့ရမှာပါ။
7.27d မှာ Item လေးခုနဲ့ ဟီးရိုး ၂၉ ယောက်တို့ကို Balance Change ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အများစုက သိပ်မသိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝယ်များတဲ့ Drum of Endurance ကို Attributes +6 ကနေ +4 သို့ လျှော့ချပြီး Heaven’s Helberd ကိုတော့ 400gold တန် Recipe တစ်ခု ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Regen အနှုတ်ခံရပြီးနောက် လူကြိုက်နည်းသွားတဲ့ Soul Ring ကိုတော့ Recipe Cost ကို 350g မှ 275g သို့ လျော့ချပေးလိုက်ကာ Helm of the Dominator နဲ့ ညှို့ထားတဲ့ Creep ရဲ့ HP Bonus အား 1500 မှ 1000 သို့ လျှော့ချပြီး Armor +4 ပေါင်းပေးပါတယ်။
Bloodrage ကို အရင်လို သွေးလျော့စေတဲ့ စတိုင် ပြန်ပြောင်းပြီးနောက် လူကြိုက်နည်းသွားတဲ့ Bloodseeker ကို Base Damage2ပေါင်းပေးထားသလို Bloodrage ကိုလည်း အတော်လေး Buff လာပါတယ်။ အခုတလော ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အတွေ့များတဲ့ Dark Seer ကိုတော့ မသိမသာလေးဘဲ Nerf ထားပြီး Surge ကို အရင်က Bonus Speed အဖြစ် ပေါင်းပေးပေမယ့် အခုတော့ Haste Rune နဲ့ တူညီအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ Level 15 Talent မှာတော့ Shell +400 Max Health ကို +350 သို့ လျှော့ချထားတယ်။
နောက်ထပ် အတွေ့များတဲ့ ဟီးရိုးက Doom ပါ။ Doom ရဲ့ Level2Scorched Earth ကို ကြာချိန် ၁၆ စက္ကန့်မှ ၁၅ စက္ကန့်သို့ လျှော့ချထားပြီး Devour ရဲ့ HP Regen ကိုလည်း 2/6/10/14 ကနေ 1/5/9/13 သို့ Nerf ထားပါတယ်။ Level 10 Talent မှာလည်း +13% SE Movement Speed ကို +10% ထိ လျှော့ချထားတဲ့အတွက် ပွဲတွေမှာ Level2အဆုံးထိ ယူပြီး စောစော လိုက်ကြမ်းတာတွေ မြင်ရတာ လျော့သွားမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ရှုံးပွဲရာခိုင်နှုန်း များနေတဲ့ Medusa ကိုတော့ အစောပိုင်း Creep စားရ လွယ်အောင် Base Damage +2 ပေါင်းပေးလာပြီး Stone Gaze ရဲ့ Manacost ကိုလည်း 200 ကနေ 100 သို့ လျှော့ပေးထားတာကြောင့် အတော်လေး ကိုင်ရတာ အဆင်ပိုပြေလာမှာပါ။ နောက်ထပ် အတွေ့နည်းလာတဲ့ ဟီးရိုး Mars ကိုလည်း Intelligence ပမာဏကို 20 + 1.4 ကနေ 21 + 1.6 သို့ တင်ထားပေးသလို Base Mana Regen ကိုလည်း0ကနေ 0.5 ထိ တိုးပေးထားပါတယ်။
Underlord ကိုတော့ Firestorm Cast Range အား 675 မှ 600/625/650/675 သို့ ပြောင်းလဲထားပြီး Pit of Malice ကိုတော့ Cooldown ကို မြှင့်တင်ထားပေမယ့် Disable ကြာချိန်ကို 0.9/1.2/1.5/1.8 ကနေ 1.2/1.4/1.6/1.8 သို့ ပြောင်းလဲပေးထားပါတယ်။ အဓိက အားသာချက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Atrophy Aura ကိုလည်း Balance လုပ်ထားပြီး 4/5/6/7 ကနေ 2/4/6/8 ဖြစ်သွားတာကြောင့် အစောပိုင်းမှာ နိမ့်ပေမယ့် အဆုံးထိ ရောက်သွားရင် ပိုလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ursa ရဲ့ Overpower Manacost ကို 55/60/65/70 ကနေ 40/50/60/70 သို့ လျှော့ချပေးထားပြီး အစောပိုင်း Level တွေမှာ အရင်ကထက် သိသာစွာ ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ Talent မှာတော့ Level 10 မှာ +175 Health ကနေ +1.5 Mana Regen သို့ ပြောင်းကာ Level 15 မှာ +2 Mana Regen ကို +300 Health အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Patch မှာ အမြတ်အထွက်ဆုံးကတော့ Medusa နဲ့ Mars လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Bloodseeker ကိုလည်း ပြန်လည် မြင်တွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ 7.27d Update အပြည့်အစုံကိုတော့ ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
MyTech Myanmar2020-08-28T15:56:18+06:30August 27th, 2020|Entertainment, Esports, Gaming, Tips & Stories|
၅ သိန်း ၃ သောင်း ဝန်းကျင်ကနေ စတင်ကျသင့်မယ့် Sony PlayStation 5
တောင်ကိုရီးယားက စက်ရုံကို တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆီ ရောင်းချလိုက်တဲ့ Samsung Corning
ကွန်ပျူတာတစ်လုံး စက်လေး‌နေရင် ပြန်သွက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
ဖုန်းတွေပေါ်က Screen Refresh Rate နည်းပညာအလားလာကဘာလဲ ဘယ်လဲ?
အဝေးကနေ ကြိုးမဲ့ အားသွင်းနိုင်မယ့် နည်းပညာကို မူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်တဲ့ Huawei
တရုတ်အာဏာပိုင်အနေနဲ့ TikTok ကို အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဆီ မရောင်းစေချင်ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်လာ
Sony က PS5 Event ကို ၁၆ ရက်နေ့ ပြုလုပ်မယ်လို့ ကြေညာ
မကြာခင် ကြည့်ရှုရမယ့် Dota2ပြိုင်ပွဲကြီးများ
4AM Dota2အသင်းကို ရောက်ရှိကြောင်း အတည်ပြုလိုက်တဲ့ Fy